Iindaba -Ungabandisa njani ubomi obunempumelelo kwezibane zezityalo ze-LED？
Indlela yokwandisa ubomi obusebenzayo bezibane zezityalo ze-LED？
1. Ukufakelwa kokukhanya kwesityalo se-LED. Nokuba kungofakelo lokuqala okanye ufakelo oluphindaphindiweyo, kuya kufuneka ulandele amanyathelo okufakwa kwincwadana yemiyalelo yesibane ukugqibezela inyathelo ngenyathelo, kwaye ukhethe iimeko zokufaka zeentlobo ezahlukeneyo zezibane zezibane ze-LED, ezinje nge: okanye parallel, zingaphi iiyunithi eziqhagamshelekileyo, njl.
Umbane kufuneka ulawulwe malunga nombane oqhelekileyo wesibane sesityalo se-LED, kwaye umahluko akufuneki ube mkhulu kakhulu okanye umncinci kakhulu. Ukuba umbane mkhulu kakhulu, uya kuwutshisa ngokuthe ngqo isibane. Umbane awuhlangabezani nomgangatho wezibane zezityalo ze-LED. Iziphumo zokukhanyisa kwezityalo azicacanga, kwaye umbane ophantsi ulingana nexesha elide. Kuba ukukhanya kwesityalo se-LED kulambile ixesha elide, nantoni na iya kugula emva kwexesha elide.
2. Ukucoca izibane zezityalo ze-LED. Nasiphi na isixhobo sombane siyafana. Kuza kuhlala kukho uthuli oluninzi emva kwexesha elide. Ukucocwa kwezibane ezikhulayo ze-LED kufuna ukucocwa rhoqo kwangaphandle nangaphakathi.
Ukucoca kwangaphandle kukucoca umphandle wesibane ukuqinisekisa ukubonakala okucocekileyo nokucocekileyo, kwaye izityalo ezilinywayo ziya kwenza abantu bazive becocekile kwaye becocekile; Ukucocwa kwegobolondo ehambisa ukukhanya, ukukhanya kwesityalo se-LED kufuneka kugcine umsebenzi omde kunye nolungileyo, ngaphandle kokukhanya kwesityalo se-LED. Isiphumo se-chip ngokwayo kunye nefuthe lokuhambisa ukukhanya kwepaneli yezindlu nazo zibaluleke kakhulu. Ukuba indlu yokuhambisa ukukhanya indala kakhulu, indlu inokutshintshwa ngokuthe ngqo ngaphandle kokuchaphazela ukusetyenziswa kwesibane sesityalo.
Ingaphakathi lesibane sezityalo licocekile. Ukucoca umphandle wesibane sesityalo se-LED ikakhulu kukuqinisekisa ukusasazeka kobushushu kwesiqhelo sesibane sesityalo, ukunqanda ukuqokeleleka okugqithisileyo, ukungena komoya kakuhle, kunye nokunciphisa ukusebenza kobushushu. Xa ucoca ngaphakathi kwisityalo se-LED, musa ukusisula ngetawuli emanzi ukunqanda ukubola kweenxalenye zesinyithi ezinxulumene noko. Ungasebenzisa isomisi seenwele ngomoya obandayo okanye ibrashi ethambileyo ukutshayela ngobunono uthuli. Ukuqinisekisa ukusetyenziswa okuqhelekileyo kokukhanya kwesityalo se-LED kunye nokwandisa ubomi besibane.
3. Ukufuma komoya, izibane zezityalo ze-LED ngokubanzi kungcono ukuba zibekwe zome ngangokunokwenzeka, izinto zangaphakathi azonakalisi ngokulula, kwaye inkungu eninzi ayinakuchaphazela umphumo wokuncedisa ukukhanya. Nokuba kungena umoya okanye akunjalo, kulungele ngakumbi ukutshabalalisa ubushushu bokukhanya kwesityalo se-LED kwimeko yomoya.